राष्ट्र बैंकमा नयाँ डेपुटी गभर्नरको चर्चा, निरौलाको सम्भावना - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
काठमाडौं, १९ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिनपछि बर्खास्त गर्ने तयारीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र नयाँ डेपुटी गभर्नरको चर्चा चल्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका निवारणको सरकारी प्रयास अबमूल्यन गरेको, फर्जी कागजात तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा बद्नियत राखेर खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ । काममा बद्नियत र नैतिक आचरणमा समेत प्रश्न उठेकाले उनी बर्खास्तीमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ । यससँगै नयाँ डेपुटी गभर्नरको दौड शुरु भएको छ । श्रेष्ठको ठाउँमा डेढ वर्षका लागि अर्को डेपुटी गभर्नरको नियुक्ती हुनेछ ।
नयाँ डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको चर्चा छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नरका रुपमा कार्यरत रहँदा निरौला उनीसँग निकट भएर काम गरेका थिए । डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजनीतिक लबिङमा को अगाडी हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिएपनि वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले निरौलाको सम्भावना छ । यससँगै प्रदेश ५ को योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेर पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकमा फर्केका प्रकाश श्रेष्ठ पनि प्रबल दाबेदार हुन् । श्रेष्ठ अहिले लघुवित्त विभागको नेतृत्व गर्छन् ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीको बल पुगेमा निरौलानै निर्विकल्प दाबेदार हुन् । उनी माघ ७ मा सेवानिवृत्त हुँदैछन् । आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको छानबिन प्रक्रिया एक महिनामा सकिएर सरकारमा प्रतिवेदन बुझाइने भएकाले डेढ महिनामा उनी बर्खास्त हुँदैछन् । माघको पहिलो साता सेवानिवृत्त हुन लागेको निरौला सम्भवतः त्यसको एक महिना अघि डेढ वर्षका लागि डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनेछन् ।
घट्यो चियाको निर्यात, गत आवमा रू. १ अर्बले कमी
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा गौशलाको पिङ्गलास्थानमा